Nahoana No Nanapaka Ny Arabe Ireo Sofina Goavambe? Mba Hanohitra Ny Fanarahamason’ny Fanjakana Ao Makedonia · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Desambra 2015 7:01 GMT
Niampita ny làlana ho eny amin'ny tranoben'ny governemanta Makedoniana ao Skopje ireo mpikatroka telo mafana fo avy amin'ny Fikambanana Metamorphosis, nanao akanjo miendrika voamaso sy sofina mba ho endrika hanehoana ny fanarahamaso tsy ara-dalàna atao amin'ireo fikambanana fiarahamonim-pirenena sy mpanao gazety. Sary avy tamin'i Vanco Džambaski, nahazoana alàlana.
Niampita ny arabe nanoloana ny tranoben'ny governemanta tany Skopje, Makedonia ny voamaso mitovy habe amin'ny olona, teo anelanelan'ireo sofina roa goavambe. Nanao hetsika lehibe mihoatra noho ny fiainana ny fihainoana ireo olona telo ireo, mba hanoherana ny fanarahamaso midadasika be ataon'ny fanjakana amin'ireo mpanao gazety sy ireo vondrona olom-pirenena, hetsika izay nanaporitsaka fandraisam-peo tsy ara-dalàna ny fifandraisana amin'ny antso an-tariby, nanaporofo nandritra ny taona maro no efa nanao izany ny governemanta Makedoniana.
Tao ambadik'ilay maso sy ireo sofina (ary ny fampitoviana tamin'ny fanehoana ny rakikiran'ny Abbey Road an'ny Beatles) dia nisy ireo mpikatroka mafana fo avy amin'ny Fikambanana Metamorphosis, mpiaro ny zo niomerika, sy ilay fitambarana tsy voarakitra ara-dalàna misy ireo Olom-pirenena ho an'i Makedonia, izay nitsangana nikarakara ilay hetsi-panoherana mba hanomezana voninahitra ny “Freedom Not Fear“(Fahalalahana Fa Tsy Tahotra), hetsika mitranga any amin'ny Vondrona Eoropeana manohitra ny fanarahamaso faoben'ny fanjakana.
Ilay maso lehibe mody mamaky gazety sady mitsikilo ny kaominin'i Centar ary ny ben'ny tanàna, Andrej Zernovski. Sary avy tamin'i Vanco Dzambaski, nahazoana alàlana.
Angon-drakitra miafina lehibe misy rakipeo sy antontan-taratasy (fantatra eo an-toerana hoe “baomba”) navoakan'ny lehiben'ilay mpanohitra, Zoran Zaev, efa ho iray taona izay, namboraka fa noraketina am-peo antsokosoko tsy ara-dalàna ireo fifandraisan'ireo olona maherin'ny 20.000 tao Makedonia, tafiditra amin'izany ny an'ireo mpanao gazety mihoatra ny 100 ary mpikatroka mafana fo avy amin'ny fiarahamonim-pirenena.
Ny 16 Oktobra, notetezin'ilay maso be sy ireo sofina goavana ireo tany amin'ny governemanta sy ireo foiben'ny antoko eo amin'ny fitondrana VMRO-DPMNE, ka hatrany amin'ny Kaomity Helsinki ho an'ny Zon'Olombelona, ny kaominin'i Centar, ny tranoben'ny delegasionan'ny Vondrona Eorôpeana, ny gazetiboky mpivoaka isan-kerinandro Fokus sy ny Fikambanana Metamorphosis, izay toerana misy ny masoivohom-baovaon'ny Meta sy ny vavahadim-baovao Portalb.
Ilay maso sy ireo sofina lehibe eo anoloan'ny tranoben'ny delegasiônan'ny Vondrona Eorôpeana ao Skopje. Sary avy tamin'i Vanco Dzambaski, nahazoana alàlana.
Nilaza ny antokon'i Zoran Zaev fa nahazo ireo rakitra ireo avy tamin'ny mpanitsoka ao amin'ny Minisiteran'ny Atitany, ary nampiasa ireo mba hanehoana ny zavatra tsy mety ataon'ny antoko mpitondra ankehitriny sy, mety hoe, hitarihana mpanohana misimisy kokoa hankany amin'ny laharan-dry zareo. Tsy vaovao amin'ny olona any Makedonia ireo fitondrantena mora voaraviravy ireo, fa ireo porofo matanjaka kosa dia notatazan'ireo mpiady ho an'ny zo izay niasa mafy nandritra ny taona maro mba hampiroborobo ny mangarahara ary hampitomboana ny fandraisana andraikitry ny fanjakana amin'ny fandaniana sy ny fametrahana politika ataon'ny governemanta eo amin'ny fitondrana.
Biljana Volceska (havia) avy amin'ny Sampandraharaha Miaro Ny Angon-drakitra Manokana sy i Predrag Tasevski, mpamorona ny cybersecurity.mk, nandray anjara tamin'ilay adihevitra mikasika ny “Serasera voaaro ary ireo raho-mitatao ateraky ny fanarahamaso sy fiambenana ireo serasera ” (Sary: Metamorphosis)
Miaraka amin'ilay hetsika hitam-bahoaka nataon'ireo mpikatroka, ny 19 Oktobra nampiantrano adihevitra mikasika ny fiarovana ny serasera sy ny raho-mitatao ateraky ny fanarahamaso sy ny fiambenana ny serasera ny Metamorphosis.
Nandray anjara amin'ny maha mpanentana fivoriana azy tao amin'ilay adihevitra i Biljana Volcheska avy amin'ny Sampan-draharaha Miaro ny Angon-drakitra Manokana ao Makedonia. Noresahany ny anjara toeran'ireo mpanome tolotra amin'ny antso fifandraisana ao anatin'ny fizotry ny fihainoana, fanangonana ary ny fikirakiràna ireo angon-drakitra avy amin'ireo resaka an-telefaona :
Misy ireo fenitra izay mahatonga ny resaka ifanaovana ho azo araha-maso sy ireo angon-drakitra manokana ho azo angonina, ary fanitsakitsahina ny zon'ny fiainana manokana ny fanitsakitsahana rehetra [an'ireo fenitra ireo]. Tokony manana fomba fiasa mba hiantohana ny fiainana manokan'ny mpampiasa, ary manome fiarovana sy tsiambaratelon'ny angon-drakitr'izy ireo sy ireo resadresaka ifanaovany, ireo mpanome tolotra fifandraisana sy [ireo mpamatsy tolotra Aterineto]. Mila mandray fepetra ara-teknika izy ireo mba hiarovana ny angon-drakitra, ary mamotika ireo angon-drakitra rehefa feno ny tanjona ho an'ireo fanangonana azy.
Ireo fanovàna vao haingana dia mitaky ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra mba hanamboatra “varavarana ambadika” amin'ireo teknolojiany, hahafahan'ireo Tolotra Fiarovana sy Fitsikilovana, fantatra amin'ny hoe UBK, hihaino ireo resadresaka ifanaovan'ny olona izay safidiany. Na dia mitaky aza ny Lalampanorenana hoe tokony hahazo alalana avy amin'ny fitsaràna ny UBK mialohan'ny anaovana izany, tsy mijery io fitakiana io ny politika vaovao sy ny fomba fiasa.
Toa hita ho nanaraka io fomba fiambenana tsy ara-dalàna io hatrizay ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra. Araka an'i Volcheska, manangona sy mitahiry mandritra ny 12 volana ireo angon-drakitra rehetra amin'ny fifandraisana ireo mpandraharaha amin'ny fifandraisan-davitra any Makedonia. Mandrara ny fanangonana mandritry ny fotoana lava be toy izany ny lalànan'ny Vondrona Eorôpeana, zavatra iray lehibe satria mikendry ny hiditra ao amin'ny Vondrona Eorôpeana i Makedonia amin'izao fotoana izao.
Nanamafy ihany koa i Volcheska fa tsy nanao fitoriana tamin'ny anaran'ireo olom-pirenena tsotra voalaza ho tratr'io fihainoana resaka an-tariby io ilay sampan-draharaha, ary nanazava fa izany no natao dia satria tsy mbola nisy nametraka fitarainana tamin'ny tranga nanjo azy hatreto ireo olon-tsotra niharan'io fihainoana antsokosoko io. Tsy mahagaga izany, raha jerena ny fitotonganana haingan'ny fahatokisan'ireo olom-pirenena ny governemantany.
Eo ankilan'ilay adihevitra, nisy atrikasa mikasika ny fampiasàna voaaro ny finday natao tao Skopje (Sary: Metamorphosis)
Noresahan'i Violeta Gjorgjievska avy amin'ny Hotline Internet Provider – Makedonia, fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena eo an-toerana izay miasa amin'ny fiarovana ireo zo niomerika – ireo ohatra nitranga nisy fanaovana sotasota amin'ny Aterineto na amin'ny finday ka nampiasàna ny fanangonam-peo mba hahasadaikatra na hanalana baràka ireo mpanao politika lehibe. Naneho hevitra momba ilay tolodalàna miresaka ny “baomba” ihany koa izy, izay neken'ny Parlemanta, izay handrara ny fandefasana na fitahirizana votoatinà rakipeo ao amin'ny firenena sy any ivelany.
Ilay lalàna miresaka ny ‘baomba’, natolotry ny governemanta, dia fanafihana ny fahalalahan'ny Aterineto ary manivana azy io. Tsy tokony nolaniana mihitsy ny karazana lalàna toy izany raha mbola tsy namorona vondron'olona mahefa hisoroka ny fanivanana amin'ny Aterineto.
Nalàna tamin'ny Parliemanta io tolodalàna io taorian'ny fanehoankevitra imasom-bahoaka mafy nataon'ireo mpanao gazety sy ny fiarahamonim-pirenena nilaza fa midika io fa ataon'i Makedonia ho lasa ara-dalàna ny fanivanana. Eo an-dalan'ny fifampiraharahàna ataon'ny governemanta sy ny mpanohitra io ankehitriny.
Nifarana tamin'ny atrikasa mikasika ny fampiasàna voaaro tsara ny findray ilay andro, atrikasa notarihan'i Predrag Tasevski, mpamorona ny cybersecurity.mk.
Ny fandraisan'andraikitra Freedom Not Fear – International Action Days (Andro Iraisampirenena Ho an'ny Fandraisana Andraikitra), nisy tao Makedonia hatry ny taona 2008.